Opinion | SAHAN ONLINE - Part 20
Maxaa ka soo yeeray Mr Michael Keating? See wax ka yihiin? – Maqaal
Waa hadal cunsuri oo si dadban loo yiri. Waa hadal uu asaga oran waayey balse jecleeystay in loo yiraahdo. Waa ereyadiisa, waxba yuu dad kale u … [Read more...]
Dhaqan Laga Tegey Iyo Dhibkii ka dhashay [Qore:Dr Maxamed Siciid Shaadheeye]
Somaalidu waxay ahayd dad reer guuraa ah oo noloshoodu ku xirnayd waxaay ka helaan xoolaha ay dhaqdaan(cad iyo caano), waxaa kalo waagi hore noloshooda wanaajinayeey : Cimiladu way fiicnayd oo … [Read more...]
4.5: Daarood = 100%, Digil & Mirifle = 100%, Dir = 100%, Hawiye = 100%, INTA KALE = 50%
Waa kuwee kuwa weli doonaya in qaabkaa Somaliya lagu maamulo? Yaa weli damacsan dulmigaa inuu sii jiro? Madax Soomaaliyeed baa dooneysa habkaa dulliga ah in Somali lagu hago. INTA KALE maxaa loogu … [Read more...]
GAALKACYO: Ma Daarood mise Hawiye, kee leh? – Maqaal
Suldaan Galmudug ah: Magaalada waxba kuma lihin. Heyadihii dawladda, warshad, Airport, suuqyadii, intuba waxba kuma lihin. Taa ayaa keentay colaadda joogtada ah. Teeda kale, 5ta degmo oo Mudug, labo … [Read more...]
Dhulkii Baa Hadlay oo yiri! (Qore: Dr Maxamed Siciid Shaadheeye- qeybtii labaad )
Odaygi ciil iyo caro ayuu ka qaaday doodi isaga iyo dhulka dhexmartay habeenkaas dhiniciisu dhulka ma qaban oo siduu hadba dhan isugu legdaayeey ayaa salad subax loogu adamey waagina dhushiisa ku … [Read more...]